ချစ်မိတ်ဆွေများအားလုံးကို မင်္ဂလာပါလို့ နုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
ဒီလဟာ ဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ “harvest thanksgiving festival”လဖြစ်လို့ အားလုံးအတွက် အစားအသောက်ဝိုင်းလေး ပြင်ဆင်ထားပေးပါတယ်။ အားရပါးရစားသွားရမယ်နော်။
နောက်ပြီး အသီးအနှံနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ ပန်းအလှဆင်ထားတဲ့ ပုံကိုလည်းအမှတ်တရအနေနဲ့ ထည့်ထားတယ်။ ၀ါသနာပါတဲ့သူအတွက် စမ်းကြည့်လို့ရအောင်လို့ပါ။
ဒီပုံတွေကတော့ ဂျာမနီနိုင်ငံ Frankfurt မြို့ရဲ့ Nordwest Center ဈေးအပေါ်ထပ်မှာ ပြုလုပ်ထားတဲ့ Thanksgiving အထိမ်းအမှတ်တခုပါ။
အားလုံး အသီးအနှံတွေနဲ့ အလှဆင်ထားတာပါ။
Thanksgiving month အတွက်အသီးအနှံအလှဆင်ထားပုံပါ။ ကျမတို့ မြန်မာပြည်က ဒီဇိုင်းနဲ့တူတယ်။
သစ်သီးများကို အလှဆင်ထားတဲ့ပုံပါ။ ၀ါသနာပါသူအတွက် စမ်းလို့ရအောင်နော်။
ဒါကတော့ ဂျာမုန်းပြုလုပ်ထားတဲ့လက်ရာအစစ်ပါ။ သိပ်တော့မလှပေမဲ့ ချစ်သူငယ်ချင်းအတွက် မျကစိအစာကျွေးဖို့ပါ။
ဒါကအထူးစပါယ်ရှယ် မိတ်ဆွေများအတွက်နော်။ ဂျာမုန်းရဲ့လက်ရာနော်။
ကော်ပြန့်ကြော်၊ ကြက်ကောင်လုံးကင်၊ အသဲနှလုံးပုံကိတ်
ဒါက အကင်ကင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတာပါ။ အားလုံးဝိုင်းလုပ်ဝိုင်းစားပေါ့။ ကြိုက်တာစားနော်...အားမနားနဲ့။
ဒီအစားစာတွေက ချစ်မိတ်ဆွေများအတွက်ပါ။ Thanksgiving အတွက်အမှတ်တရအနေနဲ့ ကျွေးတာပါ။ ဂျာမုန်းကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ထားတာနော်။ အားလုံးအ၀စားပြီးမှာ ပြန်ရမယ်နော်။
In the German-speaking countries,
Thanksgiving is an autumn harvest celebration called Erntedank or Erntedankfest (“harvest thanksgiving festival”). The observance usually takes place in September or October. Similar harvest festivals are common in many countries and regions around the globe.
Posted by ဂျာမုန်းဒန် at 5:40 AM5comments:
အမေ့ကို ချစ်တယ် (mothers_day.gif)
ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် ဆန်းစစ်ကြည့်မိတယ်။
ကိုယ်ဟာ ဘယ်သူမှ မဟုတ်ပါဘူး။
သူများအမြင်မှာတော့ သာမာန်လူထဲက အနိမ့်ဆုံးလူတယောက်ပေါ့
ဒါပေမယ့် အမေ့အတွက်တော့ ကျွန်တော်ဟာ
ပြီးတော့ စိတ်နေမြင့်သူ တစ်ယောက်ပေါ့
အမေ့ကျေးဇူးတွေ ကျွန်တော့အပေါ် များလှပါတယ်၊
ကျွန်တော့လို ပုထုစဉ်လူသားက ဘယ်လို ကျေးဇူးဆပ်လို့ ကုန်နိုင်မလဲလေ
ကျွန်တော်ဟာ လောကထဲက လောဘသားပေမယ့်
အမေသာ ကျွန်တော့အနားမှာ အမြဲတမ်းရှိနေနိုင်ရင်လေ
အမေ့ကို နေ့တိုင်း အနည်းဆုံး
အပြုံးပန်းတစ်ပွင့်၊ အနမ်းပန်းတစ်ပွင့် နဲ့
`အမေ့ကို အရမ်းချစ်တယ်´ ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းပြောနိုင်ရင်တောင်
ဒီကမ္ဘာမှာ အပျော်ဆုံးလူသားဟာ ကျွန်တော်ပဲ ဖြစ်မှာပါ။
ဒါပေမယ့် .............. အရာရာဟာ နောက်ကျသွားခဲ့ပြီ၊
အမေနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ ရေမြေခြားဝေးနေခဲ့တာ ကြာလှပေါ့
ဒုက္ခဝေဒနာတွေ ပေါကြွယ်ဝတဲ့ လောကဓံကို
ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျွန်တော် ဘယ်သူ့ကိုမှ မကြောက်ဘူး
ဘယ်အရာကိုမှ ကျွန်တော် မမှုဘူး
ကျွန်တော့ကြောင့် အမေ့မျက်နှာ အပြုံးပန်းဝေဆာနေတာကို
ကျွန်တော် တသက်မမေ့နိုင်ဘူး အမေရယ်.......
အမေ့စံကို လိုက်လို့ မမှီနိုင်ပေမယ့်
Posted by ဂျာမုန်းဒန် at 10:28 AM2comments:
My Favourite Make Up
ခုသလော ဂျာမုန်းအလှပြင်တာထက် အလှကုန်ဝယ်တာ ပိုပီးဝါသနာပါနေတယ်။ အလှကုန်တွေအစုံရှိနေရင်ကိုက စိတ်ချမ်းသာနေတာလေ။ ၀ယ်ထားပြီး အသုံးမလိုရင်လည်း အွန်လိုင်းမှာ ပြန်ရောင်းလိုက်တယ်။ ရောင်းလိုက်ဝယ်လိုက်နဲ့ တနေ့တနေ့အလုပ်ကိုမအားဖြစ်နေရတယ်...ဟဲ..ဟဲ။ ဒါကြောင့်ဟင်းချက်ကျွေးဖို့မေ့နေတာ...ခွတ်လွတ်ကြပါနော်..ချစ်မိတ်ဆွေတို့ရေ။ နောက်နေ့မှရှပဲရှယ်ချက်ကျွေးတော့မယ်နော်။
ဒါကတော့ Fancy လေးတွေပါ။
ဒီ Estee Lauder မိတ်ကပ်ကို ဆက်လိုက်ဝယ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့အသုံးမလိုတဲ့ တစ်ခုစီကို ဓါတ်ပုံပြန်ရိုက်ပြီး အွန်လိုင်းမှာပြန်ရောင်းတာလေ။ သူ့ရဲ့မူလဈေးနှုန်းကတော့ euro 135 ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျာမုန်း အွန်လိုင်းမှာလေလံဆွဲတုန်းက 36 euro နဲ့ ရတယ်။
ဒါက ဂျာမုန်းခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ Lancome and Chanel မိတ်ကပ်ပါ။ အစကတော့ ရောင်းဖို့အွန်လိုင်းမှာ ဈေးချိုစွာနဲ့ လေလံလိုက်တာပါ။ အိမ်ရောက်လာတော့ ဂျာမုန်းစမ်းသုံးကြည့်လိုက်တယ်။ အရမ်းကိုကြိုက်သွားတော့သုံးဖြစ်သွားတယ်။
ဒါက မိတ်ကပ် Pinsels Bobbi Brown ပါ။ တရုတ်ပြည်က ၀ယ်တာပါ။ ဒါကို အသုံးပြုပြီးမိတ်ကပ်ပြင်ရတာ အရမ်းစိတ်ချမ်းသာတယ်။
ဒါက ဂျာမုန်းရဲ့ အကြိုက်ဆုံးရေမွှေးတွေပါ။ ဒီထဲမှာတောင် Ck နဲ့ Lancome ရေမွှေးကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ Chanel ရေမွှေးကကောင်းတော့ကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့်အနှံ့အ၇မ်းစူးရှတယ်။ ဒါကြောင်းသားသားအဖေကိုပေးသုံးတာလေ။
ဒီဘက်က မိတ်ကပ်က Skin food မိတ်ကပ်ပါ။ ကိုးရီးယားကမှာယူထားပါ။ ဒါလဲလိုက်တဲ့သူနဲ့အရမ်းကို အသားအရေလှသွားစေပါတယ်။ ဂျာမုန်းက မိတ်ကပ်ထက် Prime Skin cream ကိုပိုကြိုက်တယ်။ မိတ်ကပ်မလိမ်းခင် ဒီ Skin food Prime Skin cream ကိုလိမ်းပြီးကိုယ်ကြိုက်တဲ့မိတ်ကပ်ကို ပြန်လိမ်းတာလေ။
Lancome eye shadow make up
ဒီမိတ်ကပ်တွေကို ဂျာမုန်းဆက်လိုက်အများကြီးဝယ်ပြီး ကိုယ်ကြိုက်သလို ခွဲပြီးတော့ ဓါတ်ပုံပြန်ရိုက်ပြန်ရောင်းတာပါ။ အခုတော့ ကုန်သွားပြီ။ ဒီမိတ်ကပ်ကနာမည်မကြီးသေးပေမယ့် သုံးလို့တော့ကောင်းတယ်။ ဂျာမနီမှာ လုပ်တာလေ။
Lancome Make up set
ခုလောလောဆယ် ရောင်းထားတဲ့ရောင်းကုန်ကတော့ ဒါပါပဲ။
ဂျာမုန်းအလှအပကိုစိတ်ဝင်စားသလို ချစ်တဲ့သူငယ်ချင်းများလည်း စိတ်ဝင်စားကြမဲ့သူရှိမှာပဲလို့ တွေးမိရင်း ဒီပို့စ်လေးကိုတင်ဖြစ်သွားတာပါ။ မှားတာရှိရင်ခွင့်လွတ်နော်။
Posted by ဂျာမုန်းဒန် at 1:51 PM 11 comments:
Japan Earthquake: before and after ကြည့်ချင်သူများအတွက်ပါ။ ဒီလင့်ထဲ ၀င်ကြည့်နော်။
ABC News သတင်းထဲကပါ။
Posted by ဂျာမုန်းဒန် at 5:54 AM 1 comment:
စားချင်စဖွယ် Donuts မုန့်လုပ်ကြစို့နော်
ချစ်မိတ်ဆွေများရှင်..အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဂျာမုန်းရဲ့ဘလော့ဝ်အိမ်လေးမှာ စားစရာမလုပ်ကျွေးတာတောင် ကြာရောပေါ့။ ဒီအတွက် ဒီနေ့တော့ ၀ိုင်းတော်သားများအတွက် စုပုံချစ်စေမဲ့ Donut မုန့် လေးကို လုပ်ကျွေးချင်ပါတယ်။ အားလုံးလည်းစားချင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။ ကဲ...စလိုက်ကြရအောင်။
Donuts မုန့်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများမှာ၊
ဂျုံ 300 g
ပွဆေး (back pulver) ထုတ်သေးတစ်ထုတ်၏လေးပုံတစ်ပုံ
ကြက်ဥ2လုံး
Vanilla ရည် ထမင်းစားဇွန်းလေးပုံသုံးပုံ
သကြား ၆၀ ml
Vanilla Suger 1 Tee Spoon ( 30 ml)
ထောပတ် 4Table Spoon
နွားနို့2Table Spoon( 30 ml)
မုန့်နှစ်နယ်ရန်အတွက် ပန်းကန်လုံးကြီးတစ်ခုတွင် ကြက်ဥ၊ ထောပတ်၊ဆားအနည်းငယ်၊ နို့၊ ပွဆေး၊ သကြား၊ vanilla တို့ကိုထည့်ပြီး သမအောင်အားရပါးရ မွှေပေးပါ။ မွှေစက်ရှိကမွှေစက်ဖြင့်မွှေပေးပါ။ ပြီးရင် ဂျုံမုန့့််ထည့်နော်။ ပြီးရင်ထပ်မံမွှေပေးပါ။ မုန့်နှစ်က ပြစ်လာမှာမို့ လက်နှင့်ကိုင်တွယ်ပြီးအသုံးပြုပေးရပါမယ်။ တကယ်လို့မုန့်နှစ်က ပျော့နေသေးရင် ဂျုံမုန့်ကို အနည်းငယ်ထပ်ထည့်ပါ။ အားလုံးအိုကေဖြစ်သွားပြီဆိုရင် မုန့်နှစ်ကို လုံးလုံးလေးလုပ်ပြီး အပေါ်မှာအ၀တ်စလေးနဲ့ မိနစ် ၂၀ လောက်နပ်ထားပေးပါ။ မိနစ်၂၀ပြည့်သွားပြီဆိုရင် သန့်စင်တဲ့စားပွဲပေါ်မှာ ဂျုံမုန့်ကို လက်နှင့်အနည်းငယ်ဆီ ပြန့်နေအောင်ဖြူးပေးပါ။ မုန့်တွေကို ကိုင်တွယ်လို့ရအောင် တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မကပ်ဖို့ရန် ဖြူးထားရပါမယ်။ ပြီးရင် မုန့်နှစ်ကို ဂျုံမုန့်ဖြူးထားတဲ့အပေါ်မှာ တင်ပေးပါ။ လက်နှင့်ပြားပြားလေးဖြစ်အောင်ဖြန့်ပါ။ ပြီးရင် ဒလိမ့်တုန်းဖြင့် အသာလေး ပြားပေးပါ။ ဒလိမ့်တုန်းမရှိက ပုလင်းကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ပြားပြီးသွားရင် အောက်ကပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း အ၀ိုင်းလေးတွေကို စပြုလုပ်လိုရပါပြီ။
ဂျာမုန်းကတော့ အလွယ်တကူပြုလုပ်ထားတာပါ။ ခွက်ဝိုင်း(သို့)၀ိုင်ခွက်တွေကို အသုံးပြုပြီး မုန့်ဝိုင်းလေးတွေကို ပြုလုပ်ပါတယ်။ မုန့်ဝိုင်းရဲ့အလည်ကိုတော့ ဖျော်ရည်ဗူးအဖုံးကိုအသုံးပြုတာပါ။ ကိုယ်မှာရှိတာလေနဲ့အဆင်ပြေအောင် ပြုလုပ်တဲ့သဘောပေါ့။ ပြီးရင် ဆီပူထဲမှာ ကြော်လိုက်တယ်။ ကြော်တဲ့အခါ ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပေးနော်။ တူးမသွားအောင်သတိထားနော်။
အားလုံးအိုကေပြီးဆိုရင် တူကိုအသုံးပြုပြီးဆယ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်ဆီစစ်ထားပါ။ မုန့်တွေကြော်ပြီးဆီစစ်ထားပြီးရင်..မုန့်တွေကိုယိုသုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်ကြရမယ်။ ချော့ကလက်၊ စတော်ပယ်ရီ၊ ခရမ်၊ သကြားရည် တို့နဲ့ မိမိကြိုက်နှစ်သက်သလို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ရှင်။
ကဲ...ဟောဒီမှာ ဂျာမုန်းဖန်တီးထားတဲ့ Donuts လေးတွေပါ။ ဟိုဘက်ကမုန့်ဗန်းကတော့ ခရမ်၊ သကြားရည် ၊ထောပတ်တို့ကိုရောပြီး သုပ်ထားတာပါ။ စားကြည့်နော် ကောင်းမှကောင်းပဲ။ ဒီဘက်ကလည်း ကြိုက်တာနိုက်စားနော်။
ကဲ...တွေ့တယ်ဟုတ်... အလှဆုံး Donuts မုန့်လေးတွေနော်။ ပါဆယ်ဆွဲသွားချင်သူများအတွက်ဒီဘက်ကဗန်းနော်။
ကဲ...အားလုံးကြိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။ မိတ်ဆွေရဲ့ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီး Donuts မုန့်ကိုလည်းစားကြည့်ချင်သေးတယ်။ မုန့်လုပ်မဲ့နေ့ဆို ဂျာမုန်းကိုခေါ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။
လိုအပ်တာရှိရင်လည်း မေးလို့ရပါတယ်။ မှားတာရှိရင်လည်း ခွင့်လွတ်နားလည်ပေးကြပါရှင်။
ညီမလေး..စုဘူးအိမ်လေးရေ.... ဒိုးနတ်မုန့်လုပ်နည်းတင်ပေးထားပြီနော်။ ညီမလေးတောင်းဆိုထားတာကြာပေမယ့် ဂျာမုန်းက အခုမှ တင်ပေးတာခွင့်လွတ်နော်။
Posted by ဂျာမုန်းဒန် at 3:44 AM6comments:
Labels: စားချင်စဖွယ် Donuts မုန့်လုပ်ကြစို့နော်
ဂျာမုန်းဒန်ရဲ့ဘလော့ဝ်ကိုလာလည်သူအားလုံး မင်္ဂလာပါလို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ ...ဒီဘလော့လေးဟာကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဝ်
လေးပါ။..ဒိုင်ယာရီသဖွယ်၎င်း၊ သူငယ်ချင်းများနှင့် ပျော်ပျော်ပါးပါး တွေ့ဆုံရင်းနှီးလို၍၎င်း ဘလော့ဂ်လေးအား တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ခံစားချက်ကိုဖွင့်ဟဖို့လည်း ပါတာပေါ့ရှင်။
"Shat Jam" လို့ခေါ်တဲ့ကချင်ဒံပေါက်
Barbecue Grill Party
Egg Rolls and Dessert
German style pork steak
Germany Ph.D ဘွဲ့နှင်းသဘင်
Spring Roll (ကော်ပြန့်ကြော်နော်)
ချစ်စရာ့မြန်မာအစားအစာ (28) မျိုးနော်
သစ်သီးကိတ်၊ ပန်းသီးကိတ်၊ ချော့ကလက်ကိတ်နော်
ဂျာမုန်းဒန်ကို တစ်ခုခု ပြောသွားဦးနော်။ ကြားချင်လွမ်းလို့ပါ။
တဈနေ့ (၁၀) သိနျးကြျောဖိုး ရောငျးရတဲ့ ဒဂုံ (၁) ထမငျးကွျော
Contents - Welcome to MMCP Community Forums
All of Kachin Websites links
Kachin myanmar Music
Myu Tsaw Shayi
Pratdep ai jinghpaw
The Kachin Review
ကချင်မော်ဒါယ်လ်လေးများရဲအလှတွေကလည်း လှချင်တိုင်းလှနေတာပဲလေ။ ကချင်ရိုးရာ အထည်များကို မော်ဒါယ်လ်ဒီဇိုင်းချုပ်ဝတ်ထားကြတာပါ။ တကယ်လှတယ်နော်။
ဒီသီချင်းကိုအမှတ်တရအဖြစ်နားထောင်သွားနော်... Singforyou မှာကိုယ်တိုင်သီဆိုထားတာပါ။
ဒိုင်ယာရီသဖွယ်၎င်း၊ သူငယ်ချင်းများနှင့် ပျော်ပျော်ပါးပါး တွေ့ဆုံရင်းနှီးလို၍ ၎င်း ဘလော့ဂ်လေးအား တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
လာရောက်လည်ပတ်သူ အားလုံးပျော်ရွှင်မူတွေနဲ့ ခညောင်းနိုင်ကြပါစေ လို့ ဂျာမုန်းဒန် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။ လိုအပ်သော အရာများရှိယင်လည်း ကူညီလမ်းပြပေးကြပါဟု မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။၊ Comment တွေ ရေးသွားဖို့လည်း မမေ့နဲ့အုံးနော်၊ ဖတ်ချင်လို့ပါနော်..ဟီး..ဟီး....
အားလုံးကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင် လျှက်